Global Voices teny Malagasy · 2 Avrily 2014
02 Avrily 2014
Tantara tamin'ny 02 Avrily 2014
Fitaovana Hoan'ny Lahatsary Fikatrohana : Witness
Fitaovana02 Avrily 2014
Mampiasa lahatsary hahatanterahana hetsika ve ianao? Manao fitantarana na maka sarimihetsika fanentanana na hetsika amin'ny kamerà ve ianao ? Nanantotosa ny #GVFace izahay tamin'ny 28 Marsa izay niaraha tamin'ny Witness ary niresahana momba ireo torohevitra amin'ny fomba fampiasana lahatsary hoan'ny fiarovana. Indreto sasany tamin'ireo torohevitra sy fitaovana.
Vehivavy iray no nalaina an-keriny vao tsy ela akory izay tao Bishkek. Rehefa navotan'ny polisy tany amin'ireo mpaka an-keriny ity vehivevy ity dia nitantara ny "nofy ratsiny" tao amin'ny Twitter.